जीवन लुँइटेल यस्तो नीतिले फेरि चल्लान् त ? - SangaloKhabar
जीवन लुँइटेल यस्तो नीतिले फेरि चल्लान् त ?
नायक जीवन लुँइटेललाई केहि बर्षयता चलचित्र बजारमा टिक्न खुबै गाह्रो भैरहेको छ । एकपछि अर्को असफल चलचित्रले जीवनको करिअर सकियो भन्नेहरु पनि छन् । तर, जीवन यी कुरा मान्न तयार छैनन् । उनले सबैको करिअरमा उतारचढाव आएतापनि फेरि आफू जम्ने बताउँदै आएका छन् ।
जीवन अभिनित चलचित्र ‘लेक साइड’ एक साता अगाडि रिलिज भयो । चलचित्रको प्रचारमा उनी नदौडिएका होइनन् । तर, चलचित्रको व्यापार खासै गतिलो भएन । जसले गर्दा, जीवनले बजार फर्किने आशा गरेपनि अब फर्किदैन भन्नेहरु पनि छन् ।
नायक जीवन लुँइटेल चलचित्र बजारमा चल्नका लागि नयाँ नीति बोकिरहेका छन् । उनी आउँदो बर्ष एउटा मात्र चलचित्र खेल्ने तयारीमा छन् । उनका अनुसार, २०७४ मा एउटा मात्र चलचित्र उनले खेल्ने छन् । यस्तै, २०७५ सालमा भने जीवन २ वटा चलचित्र खेल्ने तयारीमा छन् ।
जीवन अब कम चलचित्र खेलेर हिट दिने सोचमा छन् । के, यो नीतिले जीवनको गुम्दै गएको स्टारडम फर्किएला ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०८, २०७३ समय: १५:३५:३०